Awustiraaliyaan waggoota 41 booda daballii gatii olaanaa keessummeessite – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Awustiraaliyaan waggoota 41 booda daballii gatii olaanaa keessummeessite
On May 18, 2022 43
Finfinnee, Caamsaa 10, 2014 (FBC)- Awustiraaliyaan erga bara Faranjoota 1981 as daballii gatii olaanaa mudatee hin beekne keessummeessuushee Biiroon Istaatiistiks biyyattii ibseera.
Biyyattiin baatii Eebila hangi daballii gatii galmeessitee %7.2 ta’uu beekameera.
Daayreektarri olaanaan Biiroo Istaatiistiks biyyattii Toobiyaas Toomaas ibsa laataniin, gatiin dhiyeessii humnaa fi boba’aa dabaluun akkasumas daballii gatii meeshaalee nyaataa shooraa olaanaa qabu jedhaniiru.
Mootummaan Awustiraaliyaa daballii gatichaa dandamachiisuuf bara Faranjootaa dhuma baatii Caamsaarratti doolaara Ameerikaa biiliyoona 2.1 ramaduun dhiyeessii humna elektirikaa fi gaaziirratti sirreeffama gibiraa taasisuun tarkaanfiiwwan fidhachuu Shiinwaan gabaaseera.
Fuula Feesbuukii keenyaan dabalataa odeeffannoo waqtaawaa argachuuf;
MM Abiy Ahimad Pireezidaantii Mana Maree Awurooppaa waliin mari’atan
Deenimaarkitti dhukaasa namni dhuunfaa baneen lubbuun namootaa darbe
Humni Waraanaa Raashiyaa bulchiinsa Doonibaas guutumaa guutuutti to’ate
Raashiyaan oomishalee nyaataa fi nyaatan walqabatanii maallaqa isheen gabaa alaaf…
MM Abiy Ahimad Pireezidaantii Mana Maree Awurooppaa waliin…
Deenimaarkitti dhukaasa namni dhuunfaa baneen lubbuun…
Humni Waraanaa Raashiyaa bulchiinsa Doonibaas guutumaa…
Oduu biyya keessaa14537